20+ Quruxda Guruxda Badan ee Casriga ah (Noocyada 2018)
by Melody Nieves 12 Nov 2019
Somali (Somali) translation by Adjatay Bashroh Aldad (you can also view the original English article)
Naqshadahaadu ma dhammeystiraan iyadoon qoraalka ugu fiicneyn! Soo hel noocyada qoraalka cajiibka ah ee ururkan cusub ee loogu talagalay 2018.
20+ Qoraallada casriga ah ee casriga ah
Ma jiraan wax ka qancin marka loo eego qoraalka warqadda saxda ah ee naqshadeynta. Waa hage fudud oo hufan oo hufan si aad u qaadato shaqadaada heerka xigta.
Iyo xarfaha xarfaha ah waa isku dheelitiran oo qumman iyo muuqaal ah. Sidaa darteed miyaad dareentaa asal munaasib ah oo leh astaamo muuqaal leh? Ama tijaabo madadaalo ah oo ku saabsan gardarrada iyo xarfaha qoraalka ah?
Naqshadayaasha ayaa had iyo jeer ku jira ugaadhsiga loogu talagalay qoraallada ugu fiican ee lagu qoro isbeddellada ugu dambeeyay. Sidaas awgeed, waxaannu kuu keenaynaa in ka badan 20 nooc oo casri ah oo casri ah oo leh karti ku filan oo isku mid ah si loo doorto.
Iska hubi aruurinta qoraallada casriga ah ee casriga ah ee ay sameeyeen Suuqa Envato iyo Envato Elements.
Kalsooni ha noqotee font script! Qoraalkan wuxuu ka shaqeeyaa t-shaati iyo wax ka badan. Ku cusboneysii warqad kasta oo la qoro waraaqo gacmeed oo loogu talagalay fiirinta dhabta ah! Haddii aad jeceshahay naqshad casri ah ama casaan, qoraalkani wuxuu u shaqeeyaa wakhti fiican. Hel arrimo buuxa oo xarfaha ah, tirooyin, iyo xayeysiis ah oo ku saabsan downloadkan.
Fursadaha ayaa xaddidan Sottafles. Qoraal gacanta ku qoran oo leh calaamado qoraal ah oo xagjir ah, buuggani waa madadaalo iyo mid gaar ah. Ku raaxeyso xirmo buuxa oo ah waraaqo iyo lambaro, iyo sidoo kale taageero luqado kala duwan ah. Wanaagsan oo loogu talagalay calaamadaha iyo cinwaanada!
Duur Joog Ones Goraal
Ku dhaji safar aan caadi aheyn si aad u sarreeya oo leh qoraalla font. Qoraal gacmeed oo qoraal ah oo leh casriyeyaal casri ah, xarfaha cursada, fontkani waa mid qabow iyo badan. Kala habeeyso casumaadahaaga, xirmooyinka, iyo calaamadahaan qaabkan casriga ah ee casriga ah ee sahlan in la isticmaalo.
Maxaa dhacaya haddii saxiixaagu noqdo nooc caan ah? Qoraalka Zattoya wuxuu kaliya ujiray inuu hagaajiyo naqshad casri ah. Waxay ku taal xarfo waaweyn oo isku dheelitiran oo isku dhafan oo isku dhafan oo ah jaantusyo gaaban iyo mid yar. U isticmaal boggaaga ama calaamaddaada. Iska hubi!
Isku-dubaridaha isku-dubbaridida noocyo kala duwan oo isku-dhafan, qoraalka Geraldyne wuxuu ka kooban yahay waraaqo dareerayaal ah, waraaqo isku dhafan oo isku mid ah. Isku day inaad la socoto moodal, naqshad, ama mawduuca arooska si aad u dhameysato mashaariicda ugu dambaysa Waxa kale oo ku jira taageerada luqadaha kala duwan iyo gifafyada kale ee kala duwanaansho.
Saxeex warqadahaaga iyo dukumiintiyada qoraalka qoraalka cajiib ah. Qoraalka John Davidson waa mid wanagsan iyo dadaal la'aan. Ku raaxeyso wareegyada ballaaran iyo dariiqyo si qoto dheer loo abuuray si ay u ekaadaan qorista dhabta ah. Ku tijaabi saxiixyadaada emailka, boosteejooyinka, ama xafiisyada shakhsiga ah.
Kania Goraal Typeface
Qoraallada badankoodu waa dainty iyo khafiif, laakiin Kania ayaa ka soo baxa inta kale. Abuuro cinwaanno farabadan oo isku dhafan iyo cinwaanno leh qoraallada Kania. Ku qorida waraaqaha qoraalka ah ee ku jira qoraallada dhaadheer, qoralkani wuxuu kuqornaa foorisho waraaqo ballaaran. Isku day bogagga iyo qalabka wax lagu qoro!
Ku qor sheekada noloshaada adoo ku dhajinaya sawir aad u badan. Daisies quruxsan ee Our Lives font waa super qurux badan oo xariif ah. Ku dar taabasho dumar ah mashruuc kasta oo leh qoraallada buugaagta ee qoraalka ah ee aad u fiican ee loogu talagalay xaashiyaha, daboolida buugga, iyo waxyaabo badan oo badan. Ku dar ururintaada!
Qoraalka Zenith waa nooc wax lagu qoro oo isku dhaf ah oo isku dhafan oo muujinaya natiijooyinka gaarka ah. Abuur calaamada hufnaanta leh waraaqo cadaan ah oo cad oo u muuqda inuu yahay mid dhab ah. Ku raaxayso isticmaalka galka oo dhan, xarfo, iyo xarakayn.
Naycila Goraal Font
Waxaa la abuuray aasaas qeexan iyo dabiici ah, dareemo gacmeed, font qoraalka Naycila waa wax la yaab leh! Isku duwo sawirrada dhaadheer ee dhaadheer ama maadooyin mugdi ah oo natiijada cajiibka ah. Dareemahan waxaa ka mid ah gebi ahaanba waraaqaha sare iyo kuwa yaryar iyo sidoo kale isbeddel xiiso leh.
Ku samee calaamadda ku xigta adigoo isticmaalaya font quruxda Seirra. Buuggan qoraalka ah iyo qoraalka font serif wuxuu ka kooban yahay laba nooc oo gacmo furan si loo daboolo baahiyahaaga minimalist. Ku dar qoraalka qoraalka hal-abuurka ah adigoo isticmaalaya qoraalka asalka ah, ama aad wax dheeraad ah ku dheehan tahay qaabka serif. Isku day inaad ka soo qaadato qalabka wax lagu qoro, dharka, ama badeecad kale.
Naqshadaha casriga ah ee naqshadeynta ee aad ku raaxeysaneyso oo leh qoraalka Serrona. Dhamaanba ku habboon yihiin calaamadaha, qalabka wax lagu qoro, iyo waxyaabo kale oo badan, qoraarkani wuxuu ka kooban yahay dareen xaqiiqo leh, oo leh saddex nooc oo ay ku jiraan. Hel helitaanka si joogto ah, digtoon, iyo nuqulo la soo koobay hal hal gaaban!
Violaceous - BurushGoraal
Qoraallada buraashka, sida font-ka Violaceous, u sheeg shaqadaada in ay dareemaan handmade degdeg ah! Ku dhiirrigeliya qorayaasha aad jeceshahay inay abuuraan sawirrada muuqaalka leh ee muuqaalka leh qaabdhismeedka iyo muuqaalka. Fiiri buugyarahan buuxa ee xarfaha, lambarrada, iyo xakamaynta fursado dheeraad ah.
Haddii aad u baahan tahay nadiif, casri casri ah ee calaamaddaada ama boggaaga, Magehand xarfaha ayaa sameeya kali ah. Fiiri qaabka casriga ah ee casriga ah kuwaas oo ay ku jiraan curves aad u fiican iyo jilayaal sharaf leh. Soo qaado maanta si aad u hesho sawirro badan oo kala duwan iyo kuwo kale.
Muuqaalkaaga u geey jimicsigaaga, shayga, ama sheekooyinka Amnesty font. Qoraal gacmeed oo qoraal ah oo cajiib ah, qoraalkani waa mid awood leh oo muujinaya. Fiiri noocyada cadayada ee kala duwan si ay u sahamiyaan doorashooyin dheeraad ah. Waxaad ku farxi doontaa dhamaadka dhabta ah ee gardarrada!
Wilgaty Qoraal Qoraal
Xirfadaha kala duwan waa mid ka mid ah siyaabaha ugu wanaagsan ee lagu heli karo dhowr faylasha farsamada ah hal hal haboon. Noocyada qoraalka Wilgaty waxay leeyihiin qaabab siman oo adag si loo buuxiyo dhawr jeer. Waxaa sidoo kale ku jira qaabkan qaabka qalinka ah ee khafiifka ah kaas oo ah mid khafiif ah oo casri ah. Iska hubi!
Itaki - Qalabka Calaamadaynta
Noocyada design oo leh fariimo awood leh oo isticmaalaya font Itaki. Astaanta farshaxanka ee leh qoraalo qurux badan, qoraalkaas wuxuu xambaarsan yahay waraaqo qurux badan oo eegaya dhab ahaan gacanta oo lagu qoro macnaha qoto dheer. Ku tijaabi qalabka wax lagu qoro, waraaqaha, iyo xittaa dukaamada.
U keen tamar dhalaalaya naqshad kasta oo leh Wonder Sunshine. Isku daridda isku dhafka qaababka casriga ah ee casriga ah ee qoraalada casriga casriga ah, buuggani waa mid xiiso leh oo madadaalo leh. Sameeya bedelaadaha kale ee qaab-dhismeedyada oo isticmaalaya barnaamij kasta oo waawayn.
Heats Goraal Font
Ku darso wax yar oo ku saabsan cinwaankaaga ama cinwaanka qoraalka Heats script. Qoraal wax lagu qoro oo gacmeedyo leh waraaqo rasmi ah, buuggan waa mid ku habboon mashaariicda sheyga iyo waxyaabo badan. Naqshad sameynta habka dib loo dhigo oo ku habboon mashruucyo hal-abuur leh. Iska hubi!
Sahlan Qalabka Calaamadaha
Ma u baahan tahay xaraf cad oo ka buuxa tamar iyo hadal? Ka dibna fiiri font Brush Easy. Muujin qoraal ah oo la isku qurxiyey oo leh muuqaal cad cad, qoraalka buuggani waa mid geesanimo leh oo qosol leh. Samee naqshad caadi ah oo ku taalla buqashadaan aalado farshaxan oo asal ah.
Goliath Goraal Font
Samee qaabab kalsooni leh warqada Goliath. Qoraal qoraal ah oo gacmeed leh oo leh laba nooc oo cajiib ah, xirmadani waa mid waxtar leh oo si fiican loogu talagalay. Ku riyaaq ereyga rasmig ah ee asalka ah ama isku dar midabo kala duwan oo loogu talogalay dareen kale. Sii isku day!
Trendy Goraal Font Duo
Fariin kale oo duo ah oo weyn oo lagu magacaabo 'script duplicate'. Qalabkani wuxuu ka kooban yahay hal waraaq oo xarrago leh oo ay la socdaan qoraalka muuqaalka cad. Isku qas oo la cayaar qaab kasta oo natiijada ugu fiican. Sidoo kale waxaa ku jira buuggan waa taageerada luqadaha kala duwan iyo liis ay ku jiraan bedelaadaha qaab-dhismeedka. Iska hubi!
Muusikada Farabiga ah
Fariimaha qoraallada waa jumlado ka mid ah sawirada. Waxay isku dhafan yihiin naqshadeyn ama mawduuc kasta oo leh qumman oo qumman. Sidaa daraadeed dhowr ka mid ah ka soo ururinta ururkan loogu talagalay xirmooyinka naqshada ugu dambeyn!
Ma rabtaa xarfaha qoraalka ee cajiibka ah? Hubi aruurintan:
30 Farshaxanka Cursada ugu Fiican
35 Farshaxanada ugu Fiican
Isku dayay mid ka mid ah hantidaas? Aan ogaano! Noo sheeg qoraalada fartan ee fartan ee faallooyinka hoos ku qoran.
Tani waxa ay ahayd xulasho ah ilo cayiman oo qiimo leh oo loogu talagalay naqshadeeyaha casriga ah. Wixii qoraalo casri ah oo casri ah, ka hubso Envato Market iyo Envato Elements, ama raadi caawimaadda xirfadlayaasha xirfadlayaasha ah ee Envato Studio. Nasiib wanaag!